မေးခွန်း ကိန္နရီကျွန်းစု P3Dv4.2
1 months ago 11 တစ်နှစ် #1028 by Seat7A
ကျွန်မဓာတ်ပုံရှုခင်းအလုပ်လုပ်ရ can't P3Dv4.2 ။ ငါ install အလိုအလျောက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကဗားရှင်း 4.2 အတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကဤနေရာတွင်မဆိုသိကြပါဘူး။ ကျွန်မဓာတ်ပုံရှုခင်း disengage နှင့်က default ကိုသုံးပါလျှင် Thre ရှုခင်းမကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ် P3D ရှုခင်း။
1 months ago 11 တစ်နှစ် #1029 by rikoooo
ရှုခင်း၏ရှုခင်းစာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပြပါပါသလား P3D v4? ဤသည်အရေးအပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
1 months ago 11 တစ်နှစ် - 1 months ago 11 တစ်နှစ် #1032 by DRCW
ပိုဆိုးပိုဆိုးမှကြွလာလျှင်။ install တစ်ဦးကို manual လုပ်ပါ။ "စာရွက်စာတမ်းများမှတစ်ဆင့် folder တစ်ခု Create ကြောင့်အမည် နေရီကျွန်းစု "၌ဖိုင်တွဲသောဖိုင်တွဲ loaded ပြီးတာနဲ့။ သင် download လုပ်တည်နေရာအဖြစ်ဖန်တီး folder ကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်ကို select တစ်ဦးကို manual ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင့်ရဲ့ Desktop ပေါ်မှာဖိုင်တွဲထားကူးယူရပျရပျ P3D v4 Add-ons တွေကို သင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများဖိုင်တွဲထဲမှာတည်ရှိပါတယ်ဖိုင်တွဲ။ စတင် P3D V4 ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းပု alt မီနူးဘားတန်းကိုတက်ရောက်စေဖို့အဓိကသော့ချက်။ ကို Select လုပ်ပါ ကမ္ဘာ့ဖလား / ရှုခင်းစာကြည့်တိုက် / ပြီးတော့ ဧရိယာ Add... ယခုအခါစာရွက်စာတမ်းများတွင်တည်ရှိသည်ဖိုလ်ဒါကိုရွေးပါ ... ထိုအခါကိုသက်ဝင်။ ဒါကရှုခင်းကိုသက်ဝင်သင့်ပါတယ်။ Lockheed မှာရှေးရှေးကတော့ထား P3D v4 Add-ons တွေကို သင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများဖိုင်တွဲထဲမှာ folder ကိုသင် program ကိုပြန်ဖွင့်ရန်ရှိသည်သင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ... အားလုံးသင့်ရဲ့ရှုခင်း add-ons တွေကိုရှိသေးဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုလမ်းများတွင်သင်သည်ခြစ်ရာကနေအားလုံးသင့်ရဲ့ရှုခင်းကိုပြန်ဖွင့ရန်မလိုပါ။ သင်ပြုရန်ရှိသည်ဖိုင်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်အသက်သွင်းသည်။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်: 1 တစ်နှစ် 11 months ago နေဖြင့် DRCW.
1 months ago 10 တစ်နှစ် #1044 by wozee
ဟိုင်း။ ငါစကို manual install ခဲ့ဘူး P3dV4.2 ကြောင့်ဿုံ OK ကို ဝင်. ... အလွန်ကောင်းတဲ့ကြည့်ခြင်း
0.202 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်